The Kpop Times Media - Lee Do Hyun ရဲ့ဒရာမာရိုက်ကွင်းကို ကော်ဖီကားပို့ပေးခဲ့တဲ့ IU
Lee Do Hyun ရဲ့ဒရာမာရိုက်ကွင်းကို ကော်ဖီကားပို့ပေးခဲ့တဲ့ IU
Written by The Kpop Times
အဆိုတော် ၊ မင်းသမီးချောလေး IU ဟာ မင်းသား Lee Do Hyun ရဲ့ဒရာမာအသစ်ရိုက်ကွင်းကို ကော်ဖီကား ပို့ပေးခဲ့ပြီး Lee Do Hyun မှကျေးဇူးတင်ကြောင်း အင်စတာဂရမ်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ IU နဲ့ Lee Do Hyun တို့ဟာ "Hotel Del Luna" ဒရာမာထဲမှာ အတူပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ဖီကား ရှေ့မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ Lee Do Hyun မှ "ပိုးစုန်းကြူးပြန်မွေးဖွားလာပြီ ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချစ်ရတဲ့အစ်မ ၊ # ဒီ cart ကရော 'အရသာရှိတဲ့အစားအစာစားပြီး သေသွားကြသူများ' မှာပါလား #တစ်ကိုက်တည်း" ဆိုတဲ့စာကိုရေးထားပါတယ်။
ကော်ဖီကားမှာတော့ IU က "ဒါရိုက်တာ Lee Eung Bok နဲ့ မင်းသား Lee Do Hyun ကိုအရမ်းအားပေးနေပါတယ် ၊ 'Sweet Home' fighting! ၊ "ပိုးစုန်းကြူးနောက်ဆုံးတော့ မင်းရဲ့ 'Sweet Home' ကိုရှာတွေ့သွားပြီလား?" လို့ရေးထားပါတယ်။
Lee Do Hyun ဟာ 'Hotel Del Luna' ဒရာမာထဲမှာ Go Chung Myung ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ tvN ရဲ့ဒရာမာအသစ် 'Sweet Home' မှာပါဝင်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Hotel Del Luna ထဲက ပိုးစုန်းကြူ းလေးကိုရော သတိရကြသေးရဲ့လား?
Twice အဖွဲ့ဝင်တွေကို iPhone လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ IU
IU နဲ့အတူ သီချင်းအတူတွဲဆိုချင်တယ်လို့ Chen ပြောဆို
လာမယ့် အောက်တိုဘာလမှာ Comeback ပြုလုပ်မယ့် IU
ဖုန်းပြောတာကိုမရပ်ချင်တာကြောင့် Yoo Inna တို့အပေါ် ဂျီကျနေတဲ့ IU
Season2ဆက်ပြဖို့ မရှိတဲ့ 'Hotel Del Luna'
Latest from The Kpop Times
Taeyang ပြောတဲ့ Big Bang ရဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမှု
ကြည့်ရှုသူ ဘီလီယံချီသွားတဲ့ BLACKPINK ရဲ့ DDU-DU DDU-DU
Music Bank မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Taeyeon
၂၀၁၉ မှာ အယ်လ်ဘမ်ရောင်းအား ၇သန်းနီးပါး ရရှိထားတဲ့ BTS
More in News Section « အစ်မရဲ့ လက်ထပ်ပွဲမှ ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေမျှလိုက်တဲ့ BIGBANG အဖွဲ့ဝင် G-Dragon "Worldwide iTunes Album Chart" ရဲ့ထိပ်ဆုံးက SuperM »